आम हड्ताल केका लागि र कहिले सम्म ? « Khabar24Nepal
आम हड्ताल केका लागि र कहिले सम्म ?
मैले सिधै भनिरहेको पनि छु कि कुनै दल र नेताहरुको भरिया पनि होईन हुन पनि चाहान्न । भाषणलाई ताली मैले वजाउंदिन तर भाषणलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेका जुन पार्टिका नेता भए पनि सफलताको कामना गर्दछु । त्यो कामना हो, राष्ट्रको विकास र सुरुवातको नमुनालाई ।
पटक पटकका भुकम्प बाडी पहिरो र नाकावन्दीमाथि लामो समयसम्म कोरोनाले विछिप्त भएको देश नेपाल र नेपाली जनतामाथि आम हडताल मलम लगाउन हो वा थप विछिप्त वनाउनको लागि हो कमरेडहरु ? यदि राष्ट्र र जनताहरुलाई वन्धक र असुविधा पर्ने गरी गरेका बन्द हडताल दाहाल वा ओली जसले गरेपनि मेरा तर्फबाट वहिष्कार छ र सदैव हुनेछ ।
एक दिनको बन्द हडताल र तोडफोडले जन्ताहरु र राष्ट्रलाई पर्ने घाटा असुविधालाई मध्यनजर गर्न नसक्ने पार्टीका नेताहरु नै होईनन युरोपियन युनियन र दिल्लीका एजेण्ट हुन । बन्द हडतालको समयमा दैनिक मजदुरी गरिखाने जनताहरु र बिधार्थिहरुको जिम्मा कसले लिने कमरेडहरु रु अनि ती गरिव र निम्नस्तरका जनताहरुको घरमा चुलो बलेको छ त ?
राष्ट्र वनाउन राजनीतिमा प्रवेस गरेका नेताहरु राष्ट्र धस्त वनाउन र सत्तामा पुग्न लगातार बन्द र हडताल गरेमा अब नेपाली जनताहरु र उक्त दलका कार्यकर्ताहरुले पनि बहिष्कार गरी नेतालाई चेतना दिनुहुन संपुर्णमा अनुरोध छ । तर यो स्टाटस कसका पक्ष र विपक्षमा गयो मलाई पनि जानकारी छैन । कमेन्ट आएपश्चात मात्र जानकारी हुनेछ।
नेपाल त्यसै पनि भारतीय नाकाबन्दीको शिकार भएको र ६० लाख युवा शक्ति दिल्लीका कोठिमा साढी धुनदेखि विश्वका कुना कुनामा भेडा चराउन पुर्याउंदा पनि अझै पुगेन कमरेडहरु ? र त अब पनि नेपाल बन्द गराएर नेपाललाई भारतकै जिम्मा अर्थात प्रान्त वनाउन मन छ ? जवाफ चाहिन्छ हरेक स्वाभिमानि नेपालीहरुलाई र सबैले अब जवाफ खोज्ने बेला आएको छ कि , यो बन्द केका लागि र कहिलेसम्म ?
लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अर्घाखाचीमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।
राजनीति, नाफाको ब्यपार या जनताको सेवा ?
कोहलपुर व्यस्त सडक, “आ -आफ्नैधुनमा व्यस्त मानिसहरु”
चेत वावा काशी !
ट्वान्टिफोर नेपाल मिडीया प्रा लिको कार्यालयमा लक्ष्मीपुजा सम्पन्न
काठमाडौंबाट डाँका घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा ६ जना पक्राउ